Ukurhweba ngokuxhamla | Ungasisebenzisa njani isibonelelo seNZUZO Iingcebiso eziPhezulu! Oktobha 2021
Yintoni uxhathiso kurhwebo? Ukuchaphazela intsingiselo kunye nendlela yokufumana uMthengisi oPhakamileyo we-2021
27 January 2020 | Ukuhlaziywa: 11 Juni 2021
Ukunyusa ukurhweba, ukuba uxhobile ngezakhono ezifunekayo kunye nolwazi ukuze uphumelele kwindawo yokurhweba kwi-Intanethi, kwaye unomdla omkhulu kumngcipheko- ubusazi ukuba uninzi lwamaqonga ngoku ayakuvumela ukuba uthengise?
Kwifom yayo esisiseko, amandla okuvumela ukuba uthengise ngemali eninzi kunokuba unayo kwiakhawunti yakho.
Kwelinye icala, oku kukuvumela ukuba wandise inzuzo yakho kwimeko yorhwebo olunenzuzo. Nangona kunjalo, ukurhweba ngokunyusa kukwanomngcipheko. Ngapha koko, unokucinywa umgama wakho wonke.
Kananjalo, singacebisa ukuba sifunde isikhokelo sethu esibanzi ku Kukuthini ukuThengisa kuRhwebo? Ngaphakathi kuyo, siza kutyhila i-ins kunye nokuphuma kwendlela yokunyusa imisebenzi yorhwebo, ngubani ofanelekileyo, ukuba uza kuba nakho ukufaka isicelo kangakanani, umngcipheko ophantsi, kunye nokunye.
Qaphela: Ukunciphisa umda e-UK kumiselwe yi-EMSA- umzimba waseYurophu owenzelwe ukukhusela abatyali mali. Uya kuba nakho ukugqitha kule mida ukuba ungumrhwebi oqeqeshiweyo.
Yintoni ukuThengisa ukuRhweba? Sebenzisa intsingiselo kunye nengcaciso
Ngamafutshane, ukurhweba ngogunyaziso kukuvumela ukuba utyale imali ngaphezulu kuneyakho kwiakhawunti yomrhwebi. Ngokwenza njalo, uboleka imali ngokufanelekileyo kwi-broker ekuthethwa ngayo.
Ukubuya kwakho, umrhwebi uza kukubiza inzala kwimali ebolekiweyo, eyaziwa ngokuba 'yimali yokulala ubusuku bonke'. Njengoko igama libonisa, oku kuhlawuliswa yonke imihla okoko ukurhweba kwakho okuvulekileyo kuhlala kuvulekile.
Ukuphakama kukuvumela ukuba ukhulise ubungakanani bakho bezorhwebo ngento echazwe kwangaphambili. Umzekelo, masithi ubufuna ukongeza amandla okurhweba ngegolide. Orindailly, uya kuba nakho ukubeka iodolo kwisixa esilinganayo okanye esingaphantsi kwebhalansi yeakhawunti yakho.
Nangona kunjalo, ngokusebenzisa ubungakanani be3: 1, ungarhweba ngesixa esikhulu kathathu. Oku kuthetha ukuba ibhalansi ye- $ 300 iya kuvumela urhwebo lwe- $ 900 ngegolide. Kwiphepha le-flip, ubungakanani bomngcipheko omkhulu, njengoko unokufumana 'umda' wakho uphele xa urhwebo luchasene nawe.
Makhe sijonge umzekelo wendlela urhwebo oluxhasileyo oluza kusebenza ngayo.
Masithi ufuna ukurhweba nge-FTSE 100. Xa uhlalutya iitshathi, uqinisekile ukuba i-FTSE 100 kungenzeka inyuke ngexabiso kwiiyure ezingama-24 ezizayo. Kananjalo, uthatha isigqibo sokongeza ubungakanani be5: 1 kurhwebo lwakho.
Une- £ 500 kwiakhawunti yakho yorhwebo
Usebenzisa isibonelelo se-10: 1, nto leyo ethetha ukuba urhwebo lwakho luxabisa i- £ 5,000
Kamva ngaloo mini, ixabiso le-FTSE 100 landa nge-3%
Ngokwesiqhelo, iodolo yakho ye- $ 500 ngeyivelise i- £ 15 kwinzuzo (£ 500 x 3%)
Nangona kunjalo, njengoko ufake isicelo somyinge we-10: 1, inzuzo yakho imi kwi- £ 150 (£ 15 x 10)
Njengoko ubona kulo mzekelo ungasentla, ukusebenzisa amandla kungandisa inzuzo yakho xa urhwebo lukuthanda. Nangona kunjalo-kwaye njengoko sigubungela kwicandelo elilandelayo, amandla okunyusa anokwandisa eyakho ukulahleka.
Zithini i-Pros kunye ne-Cons of Leverage Trading?
Urhwebo olungaphezulu kwento onayo kwiakhawunti yakho yomthengisi
Imida ye-ESMA ikuvumela ukuba urhwebe ukuya kuthi ga kwi-30: 1 kwizibini eziphambili ze-forex
Yandisa inzuzo yakho xa urhwebo luphumelele
Iyafumaneka kubo bobabini abathengi kunye nabathengi beziko
Uninzi lwabarhwebi lubonelela ngokhuseleko lokulinganisa okungalunganga
Ukurhweba okuxinyiweyo ngumngcipheko omkhulu
Imingcipheko yokuThengisa ukuRhweba - uMda
Ukuba ukusebenzisa ubungakanani bezinto ngaphandle komngcipheko, sonke besizakwenza oko. Ngamanye amagama, kutheni urhwebo nge- £ 500 nje xa sinokwandisa urhwebo lwethu ukuya kuthi ga kwi-30: 1? Impendulo elula yoku yile imajini.
Uyabona, ukuze ufumane ubungakanani kumthengisi okwi-Intanethi, iqonga liya kukucela ukuba ubeke umda, osebenza njengediphozithi yokhuseleko.
Qaphela: Umthengisi wakho omkhethileyo uya kuhlala echaza ixabiso lokurhweba apho urhwebo lwakho luza kupheliswa. Eli lixabiso lokuba urhwebo lwakho luya kuvalwa ngokuzenzekelayo.
Isixa somda oza kucelwa ukuba usibeke njengokhuseleko oluhambelana nobungakanani borhwebo lwakho, kunye nenani lomda onqwenela ukuwusebenzisa.
Umzekelo, masithi ubufuna ukurhweba nge- $ 10,000 kumanqanaba okunyusa ka-10: 1. Oku kuthetha ukuba umda wakho uya kufuna ukuba ube yi- £ 1,000 (£ 10,000 / 10). Ngokufanayo, urhwebo lwe- $ 20,000 kwi-5: 1 luya kufuna i- $ 4,000 kumda (nge- $ 20,000 / 5).
Ukuphulukana noMda wakho
Nje ukuba umda usetyenzisiwe kurhwebo lwakho oluhlaziyiweyo, umi emngciphekweni wokuphulukana nalo kwimeko apho isikhundla sakho sichasene nawe. Oku kwaziwa ngokuba iodolo yakho 'icinyiwe', oko kuthetha ukuba umrhwebi uza kuvala urhwebo lwakho ngokuzenzekelayo kwaye ugcine umda.
Ke sazi njani xa urhwebo lwethu lunokupheliswa? Ewe, nangona amanani eya kwahluka kwi-broker-to-broker, kukho indlela elula yokwenza oku. Ukuba ufake isicelo kumanqanaba e-10: 1, urhwebo lwakho luya kupheliswa ukuba iodolo ilahlekile nge-10% ngexabiso (1/10).
Kwangokunjalo, urhwebo kumanqanaba okunyusa i-4: 1 iya kupheliswa ukuba urhwebo luphulukene ne-25% ngexabiso (1/4).
Ungakuphepha njani ukuGqitywa?
Ukuthintela ukuba urhwebo lwakho lupheliswe, zimbini iindlela onokukhetha kuzo. Unokuluvala urhwebo lwakho kwaye uthathe ilahleko okanye kungenjalo, wandise ubungakanani bemida yakho.
Vala urhwebo lwakho
Inketho elula kukuvala nje urhwebo lwakho ngaphambi kokuba lufikelele kwinqanaba lokupheliswa. Nangona usaya kuphulukana nemali, ungaphulukana kakhulu nokushiya urhwebo lwakho luvulekile kwaye uvumele ukuba lupheliswe. Umzekelo, masithi uthengisa ngentengiso ye-10: 1, ngomda we- $ 200.
Ukucacisa, ukuba urhwebo lwakho luyehla ngaphezulu kwe-10%, uya kuphulukana nemali yakho ye- $ 200. Ngale nto ithethwayo, kamva emini, urhwebo lwakho luye lwehla nge-5% ngexabiso. Ukuba uluvalile urhwebo, uya kuphulukana ne- £ 100, eyi-50% yemida yakho (5% x 10: 1).
Nangona usaphulukene ne- £ 100, emva kweeyure ezimbalwa i-asethi yehlile nge-5%, okuthetha ukuba i-10% yokuphelisa indawo ichukunyisiwe. Ukuba ububambelele kwaye unethemba lokufumana okona kulungileyo, ubuya kuphulukana nomgama wakho wonke - eyi- £ 200.
Yongeza iMargin engaphezulu
Inketho yesibini efumanekayo kuwe ukongeza umgama ongaphezulu. Abanye abathengisi bayakuthumela isaziso xa usondela kwindawo yokuphelisa, bekubuza ukuba ungathanda na ukwandisa ubungakanani bemida yakho. Ukuba uyakwenza oko, oku kuyakugcina urhwebo luvulekile kwaye ngokufanelekileyo kukunike indawo yokuphefumla ngakumbi.
Olu khetho luyinkimbinkimbi kunokuba luvale urhwebo lwakho ngokuzenzekelayo, ke sichaze umzekelo okhawulezayo apha ngezantsi.
Umzekelo wokunyusa isikhundla sakho seMargin
Masithi uthengisa i-Apple stocks kumda, kwinqanaba lokuphakama kwe-4: 1. Umda wakho uyi- £ 500, ke urhweba nge- $ 2,000 kwindawo yentengiso evulekileyo. Uthenge izitokhwe zakho ze-Apple ngexabiso le- $ 180 ngesabelo ngasinye. Oku kuthetha ukuba uya kupheliswa ukuba ixabiso le-Apple liyehla laya kwi- £ 135 (£ 180 - 25%)
I-Apple ikhuphe iziphumo zayo zekota, ezingathandekiyo kunentengiso ebenethemba lazo.
Kananjalo, ixabiso leApple lehla nge-24% kwezi veki zimbalwa zizayo.
Ukuba ixabiso liyehla nge-1% eyongezelelweyo, uya kupheliswa.
Kananjalo, uthatha isigqibo sokongeza enye i- $ 500 kumda.
Oku kuthetha ukuba ngexabiso langoku le- $ 136.8, uya kuzihlawulela i-25% yomnatha wokhuseleko.
Kananjalo, ekuphela kwendlela onokucinywa ngayo kukuba ixabiso leApple lehla laya kuthi ga kwi-102.6 ye- £
Umzekelo ongentla wokunyusa isikhundla sakho semida uza kusishiya ngamathuba amabini. Ukuba ixabiso leApple ekugqibeleni libuyela umva ngaphaya kobungakanani bakho bokuqala beshishini le- $ 180 ngesabelo ngasinye, awuyi kuba yinzuzo kuphela, kodwa iinzuzo zakho ziya kwandiswa sisixhobo se-4: 1.
Kwelinye icala, ukuba ixabiso le-Apple liyaqhubeka netanki, kwaye yaphule indawo yokuthengisa izinto nge-102.6, uya kuphulukana nayo yonke imida yakho kwaye zombini ezo zinto ziya kuvalwa. Oku kuyakufikelela kwi- £ 1,000, njengoko ubeka ukhuseleko ezimbini zemida ye- $ 500 inye.
Isixa sokufumana onokufikelela kuso xa uthengisa kwi-Intanethi kuya kuxhomekeka kwinani lezinto eziguqukayo. Oku kubandakanya uhlobo lweasethi ojonge ukurhweba ngayo, nokuba ungumthengisi okanye umthengi weziko, indawo okuyo, kunye nomrhwebi uqobo.
Ngokubalulekileyo, ukuba ungumrhwebi othengisa e-UK, umrhwebi kuyakufuneka athobele imigaqo echazwe liGunya lezoKhuseleko laseYurophu kunye noGunyaziso lweeMarike (i-ESMA). Ngamafutshane, le migaqo ichaza ukuba ungathengisa kangakanani ukuba ungumthengi wentengiso.
Apha ngezantsi sidwelise umda wokuphakama ngokwe-ESMA nganye.
30: 1 enkulu Forex yorhwebo zibini
20: 1 yezibini ezingezizo eziphambili ze-forex, igolide, kunye nezalathiso eziphambili
10: 1 ye yorhwebo yorhwebo Iimarike ngaphandle kwegolide kunye nee-indices ze-equity
5: 1 yomntu ngamnye urhwebo lwesitokhwe kwiimarike
2 1: XNUMX yee-cryptocurrensets
Ngale nto ithethwayo, le mida ingentla ayizukusebenza ukuba ungumrhwebi oqeqeshiweyo.
Ukunyuswa okuphezulu kwemida yeeakhawunti zabaThengisi
Ukuze uvule iakhawunti yorhwebo yobungcali kunye nomrhwebi omkhethileyo, kuya kufuneka uhlangane ubuncinci kwezi ndlela zintathu zilandelayo.
Uvule kwaye uvale ubuncinci i-10 trades kwikota nganye kwikota ezine ezidlulileyo. Urhwebo ngalunye kufuneka lube nexabiso le- € 150 ubuncinci.
Ipotifoliyo yakho yezezimali ixabise i-500,000, okanye ngaphezulu
Unamava eminyaka ubuncinci anamava kwicandelo elifanelekileyo lezemali (njengokusebenzela umthengisi-sitokhwe okanye ibhanki yotyalo-mali).
Njengoko ubona koku kungasentla, imfuneko ngu-3 ngandlel ithile. Kananjalo, umrhwebi kuya kufuneka aphonononge isicelo ngasinye xa ethatha isigqibo sokuba uyavuma okanye awukuvumeli njengomrhwebi oqeqeshiweyo. Ngapha koko, kuyakufuneka ubonelele ngamaxwebhu axhasayo.
Nangona kunjalo, ukuba uyazifezekisa ezi mfuno zingasentla, uya kuxhamla kwimida ephezulu kakhulu. Ngapha koko, oku kunokuba phezulu njenge-500: 1 kwizibini eziphambili ze-forex, kunye ne-100: 1 kwizalathiso eziphambili ezinje nge-S & P 500.
Ndilufumana njani uXhamlo kwiiNtengiso zam?
Kwiimeko ezininzi, umrhwebi wakho omkhethileyo uya kukuvumela ukuba ufake amandla kubathengi bakho nje ukuba uvule iakhawunti. Nangona kunjalo, oku kuyakuba kwimeko yokuba ubonise umrhwebi ukuba ubuqonde ngokuqinileyo ubungozi obuphambili.
Ngamanye amagama, uya kucelwa ukuba uphendule imibuzo ethile esisiseko xa ukhetha inkqubo yobhaliso. Oku kuya kuba semngciphekweni wokusebenzisa ubungakanani kurhwebo lwakho. Ukuba uphendula imibuzo ngempumelelo, amandla akho omda aya kwenziwa ngokuzenzekelayo.
Ungamfumana njani uMrhwebi oPhambili?
Ukuba unqwenela ukuqala ukurhweba kumda, kuya kufuneka ufumane umthengisi ongakuvumeli kuphela ukuba usebenzise ubungakanani kodwa uphakamise kwiklasi yakho oyithandayo. Ngale nto ithethwayo, uninzi lwabarhwebi likuvumela ukuba ufake isicelo kwi-forex kunye Urhwebo lweCFD iimarike, oko kuthetha ukuba uya kuba nokufikelela kumawaka ezixhobo zemali.
Nangona kunjalo, sidwelise ezona zikhetho zethu ziphambili zomthengisi zintathu zingezantsi. Qiniseka nje ukuba wenza uphando olongezelelweyo kumthengisi ngaphambi kokuba ubhalise.
Isishwankathelo, ukusebenzisa uxinzelelo kunokuba sisicwangciso esisebenzayo sokurhweba xa sisetyenziswe ngokuchanekileyo. Kananjalo, umela ithuba lokwandisa inzuzo yakho xa uqinisekile kwithuba elithile lokuthengisa.
Xa kuthethwa oko, ukuthengisa okunyusayo kukwangumngcipheko omkhulu. Ukuba urhwebo luya kwicala elahlukileyo kwento obukade uyithembile, ungaphulukana nomgama wakho wonke.
Ekugqibeleni, ukuba uthatha isigqibo sokurhweba kunye nomgangatho, kufuneka uqinisekise ukuba unolwazi oluqinisekileyo lomngcipheko ophantsi. Ngapha koko, kufuneka uqinisekise ukuba ufakela ilahleko ezinengqondo ukukhusela indawo yakho ekucinyweni.
Yintoni umthengisi ophakamileyo?
Njengoko igama libonisa, umthengisi ophakamileyo weqonga liqonga lokurhweba kwi-Intanethi elinikezela ngemida ephezulu. Nangona kunjalo, abathengisi abanakuphinda bakhethe ubungakanani bemali abayinikelayo kubathengi beqonga ngalinye, njengoko imida imiselwe yi-ESMA.
Ndiza kuyifumana phi imali kunye nomrhwebi wase-UK?
Imida ethile iya kuxhomekeka kudidi lweeasethi onqwenela ukuzithengisa. Ngokwe-ESMA nganye - izibini eziphambili ze-forex zifakwe ku-30: 1 kubathengisi abathengisayo. Kwinqanaba elingaphantsi lale mida, ii-cryptocurrensets zishicilelwe kwi-2: 1.
Ndifumana njani imida yokuphakama ephezulu?
Ukuba ujonge ukurhweba kwimida ephezulu, kuyakufuneka uvule iakhawunti yomrhwebi oqeqeshiweyo. Ukuze ufaneleke, kuya kufuneka uhlangane neenqobo ezithile zokuziphatha, ezinje ngokuba neephothifoliyo ze- $ 500,000 okanye nangaphezulu, kwaye ubuncinci unyaka wamava kwicandelo lezemali.
Ngaba ndingazifinyeza iiasethi kumandla?
Ukuba ubungakanani buyafumaneka kwiklasi yakho oyikhethileyo, uya kuhlala unokhetho lokuhamba ixesha elide kwaye lifutshane kuthengiso lwakho.
Ndazi njani xa ndiza kupheliswa?
Amaqonga okurhweba aya kuhlala ekwazisa elona xabiso liphelileyo lokurhoxisa. Njengomfanekiso weballpark, oku kuhlala kubalwa ngokuguqula umlinganiso wepesenti njengepesenti. Umzekelo, ukuphakama kwe-10: 1 kunye ne-5: 1 kuya kuba nenqaku lokucinywa kwe-10% kunye ne-20%, ngokwahlukeneyo.
Zithini iifizi zokunyusa?
Xa ufaka isicelo kubarhwebi bakho, uboleka imali ngokufanelekileyo kwi-broker oyikhethileyo. Kananjalo, uya kuhlawuliswa ngenqanaba lokufumana imali ngobusuku.
Lithini elona xabiso liphezulu kwisitokhwe nakwizabelo?
Ukuba ujonga ukusebenzisa ubungakanani kwisitokhwe nakwizabelo, kuyakufuneka wenze oku ngeCFD. Nangona kunjalo, imida yokuphakama okuphezulu kwi-stock CFDs yi-5: 1.